FAADUMO CISMAAN: Gabadhan oo maanta Hargaysa ku geeriyootey maalintii guurkeeda | Hadalsame Media
Home Wararka FAADUMO CISMAAN: Gabadhan oo maanta Hargaysa ku geeriyootey maalintii guurkeeda
FAADUMO CISMAAN: Gabadhan oo maanta Hargaysa ku geeriyootey maalintii guurkeeda
(Hargaysa) 15 Jan 2022 – Waxaa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyootey Faadumo Cismaan Aadan (AUN), waxaana midda ugu darani ay tahay in ay dhimatay isla maalintii loo fadhiyey arooskeeda oo maanta dhici lahaa.
Faadumo ayaa loo mehrin lahaa Khaalid Maxamed Maxamuud, balse waxaa la sheegayaa inuu xanuun ku soo booday oo ay gashay xaalad deg-deg ah oo kasii daraysey ilaa ay u geeriyootay, taasoo keentay in xafladdii qosolka iyo farxadda ku socotey ay qamuunyo iyo tacsi isu rogto.
Dhacdadan murugada badan ayaa aad looga hadal hayaa baraha bulshada, iyadoo ay dadkii u dhowaa ee asxaabta la ahaa iyo kuwa maqlay khabarkan qamuunyaysaniba ay si u qaadan waa ah uga falcelinayaan dhanka baraha bulshada.
Dhowr bilood kahor ayay arrin middan ka ag dhowi ka dhacday Jigjiga, kaddib markii caruus meherkiisii markaa laga soo tegey uu geeriyoodey kaddib markii uu la gaddoomey gaari uu la socdey.
Previous articleWoqooyiga Kuuriya oo diyaarsatay gantaal baalistig ah oo lagu tilmaamay ‘midka dunida ugu dheereeya’ (2 dal oo qura ayaa haystey)
Next articleCali Yare oo isaga oo aan dareensanayn sheegay in MW Farmaajo uusan Muqdish xukumin (3 khalad oo dhacay)